नयाँ स्यामसंग ट्याब S7 फे र ट्याब ए7लाइट आउँदैछ।
२१-०6-०१ मा व्यवस्थापक द्वारा
समाचारबाट रिपोर्ट गरिएको, नयाँ सामसु g ग्यालेक्सी ट्याब एस FE एफई र ग्यालक्सी ट्याब ए Lite लाइट जुन २०२१ मा आउँदैछ। ग्यालक्सी ट्याब एस FE एफई ग्राहकहरूलाई उनीहरूले सस्तो मूल्यमा मनपर्ने सुविधाहरू प्रदान गर्ने बारेमा हो। यो ठूलो १२..4 इन्च डिस्प्लेको साथ बनेको छ, मनोरन्जन लिनका लागि उत्तम, उत्पादकता, म्यू ...
सामसु Tab ट्याब S7 प्लस VS आईप्याड प्रो २०२०
आईप्याड प्रो तर्कसंगत सबै भन्दा राम्रो ट्याब्लेट उत्तम मानिन्छ। अब सामसुले ट्याब S7 प्लस गरे जुन उत्तम एन्ड्रोइड ट्याब्लेटको रूपमा बनाउन सकेका थिए। सुविधाहरूमा उनीहरूसँग तुलना गरौं। पहिले, ट्याब S7 प्लस अनुकूलक द्रुत चार्जरको साथ आउँदछ। यो चालीसfको लागी समर्थन गर्दछ ...
एक ब्लुटुथ किबोर्ड र एक वायरलेस किबोर्ड बीच के भिन्नता छ?
१ भिन्नता १: बिभिन्न जडान विधिहरू। ब्लुटुथ किबोर्ड: ब्लुटुथ प्रोटोकल को माध्यम बाट वायरलेस ट्रान्समिशन, प्रभावी दायरा भित्र ब्लुटुथ संचार (१० मिटर भित्र)। वायरलेस किबोर्ड: इनपुट जानकारी इन्फ्रारेड वा रेडियो तरंगहरू मार्फत विशेष प्राप्तकर्तामा प्रसारित गर्नुहोस्। २ फरक गर्नुहोस् ...
कुन फोलियो तपाईंको नयाँ आईप्याड प्रो ११ १२..9 इन्च २०२१ को लागि सहि छ?
२०२१ नयाँ आईप्याड प्रो ११ र १२..9 इन्च मेको आधा मा खरीद गर्नका लागि उपलब्ध छन्। एप्पलले भनेः अन्तिम आईप्याडको अनुभव। अब श्वास M1 permance, एक लुकाउन XDR प्रदर्शन, र ब्ल्याजिzing-फास्ट 5G वायरलेसको साथ। विश्वास गर्नुहोस् तपाई यसलाई प्राप्त गर्न उत्साहित हुनुहुन्छ। के तपाइँ तपाइँको नयाँ आईप्याड पी को लागी सबै तयार गर्नु भएको छ ...
BOOX नोवा पाठकका लागि नयाँ डिजाइन केस
BOOX nova3color ereader का लागि नयाँ केस अधिक र अधिक व्यक्तिहरू ereader मा ebook पढ्न रुचाउँछन्। यस स्लिम ईडरमा धेरै पुस्तकहरू पढ्न सजिलो छ। धेरै भारी कागजका पुस्तकहरू बोक्न डराउनु पर्दैन, जसले अधिक ठाउँ र पैसा लिन्छ। अब BOOX ereader सबै भन्दा मनपर्ने ereaders को हो। म ...
सामसु g ग्यालेक्सी ट्याब A7 लाइट 7.7 इंच को लागी नयाँ उत्पाद रिलिज
विदेशी समाचार बाट खुलासा, सामसु g ग्यालक्सी टैब A7 लाइट 7.7 इंच हालसालै रिलीज हुनेछ। मोडेल नम्बर एसएम- T225 एसएम- T220। यो अल्ट्रा पातलो मेशिन बडीको साथ 7.7 इन्च छ। USB-C कनेक्टरको साथ। त्यो आकार मनपर्ने आकार, र एक हातले अपरेट गर्न सुविधाजनक हो। अब पातलो र हल्का मोटा सुरक्षा ग ...
तपाईको आईप्याडका लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प
तपाईको आईप्याडका लागि उत्तम विकल्प तपाईले नयाँ प्याड पाउँदा तपाईले केहि सामानहरू तयार गर्नु पर्दछ जुन आवश्यक हुनुपर्दछ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण एक सुरक्षात्मक मामला हो। तपाइँको आईप्याड यति महँगो छ कि तपाइँ यसलाई महको रूपमा रक्षा गर्नुपर्दछ .यो दिन र रात तपाइँसँगै रहनेछ। त्यसकारण हामीले यसको कदर गर्नुपर्दछ र उसको सुरक्षा गर्नुपर्दछ वा ...
ट्याब्लेट भविष्यमा बढ्नेछ
के ट्याब्लेट बजार यो नयाँ वर्षमा बढ्नेछ? यस बर्षको महामारी पछि, दुबै मोबाइल कार्यालय र विद्यार्थीहरूको अनलाइन शिक्षण एकदम लोकप्रिय छ। अफिस सिक्ने दृश्यको सीमा क्रमशः धमिलो पारिएको छ, र काम गर्ने वातावरण अब कार्यालय, घर, कफ ... मा सीमित छैन।
All-New Design संयुक्त टच प्याड कीबोर्ड TPU केस आजकल, हामी हाम्रो सबै नयाँ डिजाइन किबोर्ड ट्याब्लेट केस रिलीज गर्दछौं - IPad हवा th औं जेनेरेसन १०. inch इन्च २०२० को लागी चुंबकीय TPU किबोर्ड केस। एक केस तपाईलाई वास्तवमै मनपर्दछ। यसले तपाईंको आईप्याडको लागि पूर्ण आकारको किबोर्डको साथ सटीक ट्र्याकप्याड संयोजन गर्दछ ...